कांग्रेस सभापति देउवा सडकमा नआउनुको कारण खुल्यो ! « Ok Janata Newsportal
कांग्रेस सभापति देउवा सडकमा नआउनुको कारण खुल्यो !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध खुलेर नलागेको उनकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस सशक्त रुपमा सडकमा नआउँदा प्रतिगमन ढाल्न केही समय लाग्ने नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष) पनि बताउँदै आएको छ ।
आखिर किन शेरबहादुर देउवा सडकमा देखिदैनन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकारेर अगाडि बढ्न नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर, उनी पार्टीभित्रको विवाद साम्य नहुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । देशभरका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुको देउवामाथि दबाब छ ।
सभापति देउवा बैशाखसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा मनको लड्डु घीउसँग खाने भनेझैँ बसेको उनकै पार्टीका नेताको भनाइ छ । बैशाखमा प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति नआएपछि मात्रै देउवा सडकमा भेटिने कांग्रेस पंक्तिको भनाइ छ ।
यता, २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेको कांग्रेस निर्वाचन चाहान्छ । तर, व्यवस्था नै धरापमा पारेर निर्वाचनमा जान नहुने पनि उसको भनाइ छ । ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस नेता बताउँछन् ।
कांग्रेस बलियो भएर सडकमा नआउञ्जेल प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनलाई ढाल्न नसकिने उनीहरुकै नेताले बताएका छन् । तर, कांग्रेस भने हेर र, पर्खमै अल्झिएको छ ।